Jim Berryhill si na Martech Zone |
Edemede site na Jim Berryhill kwuru
Jim Berryhill kwuru
Jim Berryhill nọrọ ihe karịrị afọ 30 na njikwa sọftụwia sọftụwia na njikwa ahịa, na-eduga ndị otu arụmọrụ dị elu na ADR, CA, Siebel Systems, na HP Software na-elekwasị anya na ire ahịa bara uru. Ọ tọrọ ntọala DecisionLink na ọhụụ iji mee ka ndị ahịa jiri ihe bara uru bara uru site na ịnapụta usoro izizi azụmaahịa maka njikwa ahịa ndị ahịa.
Saturday, July 17, 2021 Saturday, July 17, 2021 Jim Berryhill kwuru
Imechi ire ere bụ nnukwu oge. Ọ bụ mgbe ị ga - eme mmemme niile abanyela n’ahịa ọhụrụ. Ọ bụ ebe a napụtara mbọ ndị gị niile na ngwaọrụ CRM na MarTech gị. Ọ bụ a pop-na-champeenu na-eku ume a ume nke enyemaka oge. Ọ bụkwa naanị mmalite. Ndị ahịa na-eche echiche na-eche echiche na-aga n'ihu na-ejikwa njem ndị ahịa. Mana mmechi aka n'etiti ngwa ọdịnala nwere ike ịhapụ